Wararka - 2020 isha iftiinka caafimaadka qabta - ShineOn ayaa kula socota
Hogaamiyaha isha iftiinka caafimaadka qabta 2020 - shineon wuu kula socdaa
Sannadka 2020 wuxuu goobjoog u ahaa xoog badan oo dabeecad xumo ah. In geeddi-socodka dib-u-waafajinta u dhexeeya aadanaha iyo dabiiciga, Bandhigga Nalalka Caalamiga ee Guangzhou, oo dib loo dhigay muddo ku dhow saddex bilood, ayaa ugu dambeyntii la bilaabay. Shineon wuxuu had iyo jeer ku dhegan yahay dariiqa farsamo ee 'nal caafimaad qaba'. Maaddaama 'hoggaamiye il iftiin caafimaad leh', Shineon soo bandhigay alaabooyin ayaa diiradda saaraya u adeegida baahiyaha macaamiisha ee ilaha iftiinka tayada sare leh.
Hoolka Bandhigga Pazhou 10.2 C02 waa qolka Shineon, oo muujinaya taxane kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha shineon.
Shineon wuxuu soo jeediyay fikradda buuxda ee iftiinka caafimaadka qaba horaantii sanadka 2016, wuxuuna hogaaminayay soo bandhigida alaabada muuqaalka buuxa ee sanadka 2017. Hada si isdaba joog ah ayaa loo sifeeyay waxaana loo tuuray afar taxane ah oo taxane ah: taxane indho-fiiqan, taxane indho-indheyn , Taxanaha qorraxda, iyo taxanaha filimada iyo telefishanka. Afarta taxane waxay ku saleysan yihiin baahida macaamiisha iyo xaaladaha u dhigma dalabyada, iyagoo siinaya ciyaar faa'iidooyinka kala duwan ee taxanaha nalka buuxa. Muuqaalka guud waa isticmaalka tamarta yar iyo caafimaad.
* Taxanaha Ra98 Kaleidolite wuxuu leeyahay faa'iidooyinka muujinta midabka sare, daacadnimo sare iyo dhereg sare.
* Taxanaha ilaalinta indhaha waxay leeyihiin astaamaha isbadalka muuqaalka wanaagsan iyo iftiinka buluuga ee tamarta yar.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa goobaha wax lagu barayo si looga ilaaliyo aragtida indhaha.
* Tixraaca qoraxda wuxuu leeyahay midabbixin midab wanaagsan iyadoo loo eegayo midabkeeda buluugga ah oo qorraxda ugu dhow.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa xaaladaha sida koritaanka dhirta, jeermiska ka taranka iyo bakteeriyada.
* Taxanaha nalalka istuudiyaha wuxuu leeyahay tusmo TLCI sare ah, oo ku haboon codsiyada nalalka dheeriga ah ee sawirada.
Waxyaabaha COB waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Shineon. U hoggaansamida fikradda ah tayo sare, waxqabad sare, iyo ilo iftiin caafimaad leh, waxay si isdaba joog ah u daahfurtay muraayadda aluminium COB, taxanaha dhoobada COB, taxanaha COB ee muuqaalka buuxa, iyo taxanaha heerkulka la isku hagaajin karo ee COB si loo buuxiyo macaamiisha kala duwan Shuruudaha Codsiga
* Aluminium COB taxanaha ayaa leh faa'iidooyinka waxtarka iftiinka sare iyo kuleylka kuleylka sare;
* Taxanaha dhoobada dhoobada dhoobada leh waxay leeyihiin faa'iidooyinka iska caabbinta cadaadiska sare oo aan qatar u aheyn kalluumeysiga;
* Taxanaha buuxa ee 'COB' wuxuu leeyahay faa'iidooyinka waxyeellada iftiinka buluugga ah ee hooseeya, waxtarka iftiinka sare, iyo midab bixinta iyada oo aan dhalanrog lahayn;
* Waxyaalaha taxanaha midabka COB ee taxanaha ahi waxay leeyihiin faa'iidooyinka kala duwanaanta dalabka awooda, kala duwanaanta heerkulka midab ballaadhan, CRI sare iyo waxtarka iftiinka badan. Waxaa loo isticmaali karaa muuqaallo kala duwan sida nalalka guryaha, nalalka laga dukaameysto, madxafyada, garoomada, iwm.
Isbedelka midabka ee SHINEON heerkulka hagaajin kara COB taxanaha tooska ah
Isla goobta, saameyn kala duwan oo CRI ah ayaa la barbardhigayaa
Kooxda xirfadeed ee R & D ee Shineon waxay bixisaa dammaanad adag oo ku saabsan kala duwanaanta wax soo saarka iyo codsiyada kala duwan, sida taxanaha UV alaabooyinka cusub, taxanaha taleefanka gacanta, taxanaha moduleka DOB, iwm, kuwaas oo leh dalabyo badan oo suuq ah. Iyada oo ku saleysan Shineon ee R & D iyo awooda wax soo saar, waxaan ku siin karnaa macaamiisha xalal habaysan oo loogu talagalay ilaha iftiinka gaarka ah.